Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. Obodo dị na Zhejiang Overseas High-level Talents Innovation Park, Hangzhou, China. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 na-arụ ọrụ na ngwaike na ngwanrọ na-emepe emepe, ngwa nyocha na ngwaahịa nke ngwaahịa ngwa nyocha na reagent. Otu Bigfish na-etinye uche na nyocha mkpụrụ ndụ POCT na teknụzụ nchọpụta ọkwa dị elu ruo ogo (Digital PCR, Nanopore sequencing, wdg).
Ngwaahịa anyị bụ isi: Ngwongwo ndị bụ isi na ndị na-ahụ maka nyocha nke mkpụrụ ndụ (usoro Nucleic acid, onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, PCR oge, wdg), ngwá ọrụ POCT na ihe nyocha nke nyocha nke mkpụrụ ndụ, Nrụpụta dị elu na usoro akpaaka zuru ezu (ọrụ ọrụ) nke nyocha nyocha. , IoT modul na ọgụgụ isi njikwa usoro.
Anyị ozi: Elekwasị anya na isi teknụzụ, ewu kpochapụwo ika, rube isi na rigorous na ezi uche na-arụ ọrụ ịke na-arụ ọrụ ọhụrụ, na-enye ndị ahịa na a pụrụ ịdabere na molekụla nchoputa ngwaahịa. Anyị ga-arụsi ọrụ ike iji bụrụ ụlọ ọrụ klaasị n'ụwa n'ọhịa nke sayensị na nlekọta ahụike.